Nei Outlook PST Mafaira Achitarisana nehuwori?
musha > Products > DataNumen Outlook Repair > Nei Outlook PST Mafaira Achitarisana nehuwori?
Outlook ndiyo most yakanyanya kushandiswa email mutengi muWindows nyika. Nekudaro, Outlook PST data mafaera akajairwawo nehuwori. Sei? Pazasi isu tichaongorora zvikonzero uye zvinoenderana mhinduro.
1. Microsoft haina kupa inoshanda nzira yekudzivirira iyo PST faira huori
Yekutanga uye most chakakosha ndechekuti Microsoft haina kupa nzira inoshanda yekudzivirira huwori, seinotevera:
Iyo PST faira fomati pachayo haina anti-huori chimiro, senge yekudzoresa rekodhi senge muWinRAR .RAR archive fomati kana rukova peji senge iri SQL Server .MDF dhatabhesi. Nekodhi rekupora kana rukova peji, kana chikamu che data chakashata, zviri nyore kuti udzore uye kudzikisira mikana yekurasikirwa kwedatha ne90%.
Iyo PST faira iri nyore kukanganisika kana saizi yefaira ichiwedzera, uye hapana nzira yekudzivirira izvi otomatiki. Outlook haizoshandise akawanda mafaera ekuchengetedza iyo data otomatiki kana iyo saizi saizi iri hombe. Mushandisi anofanira kuzviita nemaoko. Uye zvechokwadi, most yevashandisi havazo cherekedza izvi. Chinhu chega chine hukama muAptlook chiri kukurudzira mushandisi kuti achengetedze maemail ekare, asi chimiro ichi hachiteerere saizi faira.
MuAptlook, hapana auto-backup ficha yePST faira. Kana Outlook yanga iine chinhu chakadai, saka kana iyo PST faira yakaora, kunyangwe kana isingakwanise kuwanikwa, munhu anogona kudzoreredza kune yekutanga backup backup, iyo ichave iine most yeiyo-up-to-date data kana backup ichiitwa vhiki rega rega.
Microsoft inopa yakasununguka PST faira kudzoreredza chishandiso chinonzi scanpst, inofambidzana neAptlook. Nekudaro, inogona chete kugadzirisa PST faira ine huori hushoma. Kana kukanganisa kana huwori hwakanyanya, ipapo scanpst inotadza most yematambudziko.
2. Vanhu vazhinji Vachishatisa iyo PST faira:
Outlook inozivikanwa kwazvo zvekuti kune vanhu vazhinji vanoishandisa mazuva ese. Uye vazhinji vari kushungurudza iyo PST faira iyo inoita kuti iite huwori:
Mazuva ano nekuda kwekuwedzera kwemaemail uye imwe data yemunhu, saizi yePST faira inowedzera zvakanyanya. Kubva pane akati wandei maGBs mumazuva ekutanga, kusvika kune anopfuura 20GB kana kunyange 50GB. Iyo yakakura iiyo PST faira, iyo iri nyore nyore ichave yakashatiswa. Muitiro wakanaka wekutarisira dhata hombe ndekuvaparadzanisa kuita mafaera madiki ePST, semuenzaniso, chengetedza maemail ekare kumafaira ePST akachengetedzwa, kuve nechokwadi chese PST faira saizi <= 10GB, pachinzvimbo chekushandisa yakakura kwazvo PST faira.
Mumwe munhu anovhara komputa kana iyo PST faira ichiri kuvhurwa neAptlook, inozokonzeresawo huwori.
Mumwe munhu anochengeta mahwindo ePST makuru pane network drive, izvo zvisingakurudzirwe sezvo PST faira pachayo isina kugadzirirwa izvi. Uye zviri nyore kukonzera huori kana uchiwana iyo PST faira kuburikidza nenetiweki.
Rumwe ruzivo rwakadzama nezve yakanaka miitiro yekudzivirira PST faira huori inogona kuwanikwa pa https://www.datanumen.com/prevent-pst-corruption/
Maitiro ekugadzirisa iyo Yakashatiswa PST mafaera:
Kana PST faira uori rikaitika, saka kutanga unogona kuedza mahara scanpst, sezvo chiri chishandiso chepamutemo chinopihwa neMicrosoft kugadzirisa mafaira ePST akanganisa, uye mahara. Kana ikasashanda, saka unogona kuedza DataNumen Outlook Repair.
8 Nzira Dziviriro PST File Corruption